के हो उच्च रक्तचाप ? कसरी घटाउने ? भेटियो नया उपाय, सेयर गर्नुहोस – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /Health/के हो उच्च रक्तचाप ? कसरी घटाउने ? भेटियो नया उपाय, सेयर गर्नुहोस
मुटुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनली आर्टरी० को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ । रक्तचापलाई ‘मिलिमिटर अफ मर्करी’मा नापिन्छ । माथिको रक्तचापलाई ‘सि’स्टोलिक’ र तलको रक्तचापलाई ‘डायस्टोलिक’ भनिन्छ ।
‘सिस्टोलिक’ र ‘डायस्टोलिक’ दुबै रक्तचाप शरीरको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । सामान्य रक्तचाप १३०र ८५ भन्दा कम हुनपर्छ । उच्च रक्तचाप भन्नाले माथिको १४० वा सो भन्दा बढी र तलको ९० वा सो भन्दा बढी भएको अ’वस्थालाई भनिन्छ ।
प्रि’हाइपरटेन्सन’ अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई सामान्य रक्तचाप भएको व्यक्ति भन्दा उच्च रक्तचाप हुने स’म्भावना ब’ढी हुन्छ । त्यसैले यस अ’वस्थामा जीवनशैलीमा आवश्यक परिवर्तन गरेर भविष्यमा उच्च रक्तचाप हुनबाट आफूलाई ब’चाउन सकिन्छ ।